Ny Hetsi-panoherana ‘Yerevan Elektirika’ sy ny Haino Aman-jery ao Armenia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Marsa 2016 4:45 GMT
Mpanao hetsi-panoherana Yerevan Elektirika. Screenshot tao amin'ny lahatsary YouTube navoakan'i Raymik.
Hetsika goavana ao anaty firenena kely ny Yerevan elektirika, fihetsiketsehana lehibe manohitra ny fiakaran'ny vidim-piainana ao Armenia sy ny fahatsapana fisian'ny kolikoly eo amin'ny sehatry ny herinaratra ao amin'ny firenena.
Nalaza tao amin'ny Twitter izany ary niteraka lahatsoratra an'arivony tao amin'ny Facebook nandritra ny tapa-bolana katroka nisian'ny hetsi-panoherana tao an-drenivohitra Armeniana tamin'ny fotoana asara [mafana] farany teo, manery ny governemanta hanaisotra ny fikasany hampiakatra ny vidin'ny faktioran'ny angovo aloan'ny olom-pirenena.
Vao tsy ela akory izay, nampidirin'ny sampam-pahalalaham-baovao iraisampirenena lehibe indrindra manerantany Reuters tao anatin'ny fantin-tsariny Sarin'ny Taona 2015 ny sary tamin'ny Yerevan Elektirika nalain’ ilay Armeniana mpaka sary Vahram Baghdasaryan.
Alahatr'i Reuters ao anatin'ny Sariny Tsara Indrindra 2015 ny sary tamin'ny Yerevan Elektirika nalain'i Vahram Baghdasaryan
Tsy ny media rehetra, na dia izany aza, no nanana fijery tahaka izany momba ny Yerevan Elektirika.
Nanasongadina ny lafin'ny filaminan'ny Yerevan Elektirika ny haino aman-jery tandrefana, raha nilalao “echec”, nandihy ny dihy nasionaly, manadio ny toerana alohan'ny ialàna ny mpanao hetsi-panoherana.
Ny fantsom-pahitalavitra sy ny fampahalalam-baovao an-tserasera Rosiana kosa nandray ny Yerevan Elektirika ho famerenana indray ny Maidan Okrainiana izay nandroaka ny filoha prô-Rosiana ary nanokatra lalana ho an'ny governemanta manohitra an'i Moskoa ao Kiev.
Tsy misy maha-ratsy ny “itovizany amin'ny Maidan”
Te-hilaza ny haino aman-jery Rosiana fa noketrehana avy any ivelan'i Armenia sy notaritin'ny fampielezan-kevitra Amerikana ny Yerevan Elektirika.
Mazava ny fitovian-javatra hoy ireo Rosiana mpandray an-tsoratra.
Ny mifanohitra tamin'ny nataon'i Okraina kosa no nataon'ny governemantan'i Armenia ary nanaiky hiaraka amin'ny Vondrona Ara-toekarena Eoraziana tohanan'i Kremlin izy tamin'ny 2013, izay lalana mazava miala amin'ny fifanaraham-piarahamiasa miaraka amin'ny Vondrona Eoropeana.
Ho an'ireo Tandrefana tenda an-kanina, tsy ampy i Okraina hoy izy ireo nandresy lahatra.
Toa tamin'ny lafiny ratsy kosa no hitan'ireo ireo mpandray anjara amin'ny Yerevan Elektirika amin'ny fandrakofana ny hetsika ataon'ny media Rosiana.
Nisy fotoana nandritra ny fihetsiketsehana, nisy zazalahy iray nihazona balaonina telo mampiseho ny lokon'ny sainam-pirenena Armeniana: mena, mavo (na volom-boasary) ary manga.
Rehefa vaky ny baolinina mena, ny manga sy mavo sisa no tafajanona ary nifantoka tamin'izay loko mavo-manga izany ny haino aman-jery Rosiana izay milaza fa fanehoana firaisam-po amin'ny Okrainiana izany. Fanoharana mazava amin'ny fitongilanan'ny haino aman-jery sy ny “mahita izay tianao ho hita” izany.
Raha ny marina, tsy nanana fifandraisana matanjaka amina mpitarika na antoko politika ny Yerevan Elektirika.
Notarihan'ny tanora sy ireo vondron'olona manabe ho amin'ny fanentanana maha-olompirenena isan-karazany ny hetsika. Nahitana teny filamatra tahaka ny hoe “Atsaharo ny Kolikoly”, “Tsy Manaiky ny Fiakaran'ny Vidin-javatra”, tao fa tsy nahitana soratra hoe “Revolisiona” mihitsy.
“Nanampy tamin'ny fanapariahana ny olana nasongadina tamin'izany ny haino aman-jery. Rehefa ilaina ny mampita hafatra, mitantara izany tsy amim-pisalasalana ny haino aman-jery”, hoy i Vaghinak Shushanyan, iray amin'ireo mpikatroka lehibe amin'ny Yerevan Elektirika.”Tsy voatery amin'ny toe-javatra ilainay hatrany, fa mamoaka vaovao [hatrany] izy ireo” hoy izy tamin'ny Global Voices.
Nandray anjara lehibe tamin'ny findaminana ny olona sy ny fitondrana azy ireo tao amin'ny Lalana Baghramyan sy ny ivon'ny hetsi-panoherana ny media sosialy.
Satria teo amin'ny 20 sy 30 taona ny ankamaroan'ireo mpanao fihetsiketsehana, naharay vaovao indrindra momba ny hetsika izy ireo ary nivorivory tao Baghramyan noho ny Facebook sy Twitter.
Saingy nivoaka ho manana anjara toerana sy andraikitra mirazotra aminy ihany koa ny media sosialy, andraikitra mivadika ho fitaovam-pitsikilovan'ny governemanta sy fanaovany fihantsiana.
Teo amin'ny haino aman-jery nentim-paharazana nitantara ny Yerevan Elektirika, anisan'ny manan-danja indrindra ihany koa ny fampahalalam-baovao Civilnet tohanan'ny vondrona fiarahamonim-pirenena ao an-toerana, sy ny sampan-draharaha Armeniana RFE / RL vatsian'ny Kongresy Amerikana ara-bola.
Lehibe tokoa ny anjara toeran'ny RFE / RL, mandefa mivantana ny hetsika ho an'ireo mpijery marobe izay nahatratra hatramin'ny 300.000 na mitovy ny iray ampahafolon'ny mponina 3.2 tapitrisa ao Armenia.
Avy amin'izany, raha heverina loatra ho tsy nanam-pikasana ny handoro amin'ny herinaratra an'i Yerevan araka ny toa sainin'ny sampam-baovao Rosiana maro azy i Etazonia, dia nisy mpanao gazety iray tao an-toerana miasa amin'ny sampam-baovao iray vatsian'ny Amerikana ara-bola kosa niezaka mafy nampiely ny vaovao.